Wonke umuntu ngezinye izikhathi ukucabanga: "Liyini ikusasa lami?" Mahhala, ngakho ngisho ngaphandle ukubhaliswa, unikele impendulo yalo mbuzo amaningi inethiwekhi imithombo. Nokho, ukuthi kwenzekani ekupheleni, kude okulindele, zifana kancane ngakho ukubhekana neqiniso lokuthi esikhundleni umuzwa wokwaneliseka okukhulu ne abavamile umsebenzisi Inthanethi uthola lingabi nomuzwa wokuthi waphucwa isizumbulu. Kodwa ngisho noma ukukhokhela isevisi enjalo, ungenawo njalo uthole ncamashi okudingayo. Ngokuvamile nge e-mail kamuva imizuzwana embalwa iza isethi ezihluke ngokuphelele emazwini okuyinto ukuhlwaya futhi baqonde kuphela lezo ezihlobana ngayo ukwazisa ukusetshenziswa kwalezi zinsiza futhi ozethembayo.
Yini elindele kimi esikhathini esizayo esiseduze? Hlangana amakhadi enhlanhla
Yiqiniso, indlela ethandwa kakhulu lokubhula ezingaba ukuphendula noma imiphi imibuzo, kodwa namanje ecasha ngokuthi ekusithekeni - okubhula.
Akukho muntu ongasho ngokuqiniseka ukuthi zazivelaphi, owenza emphemeni lokuqala kakhulu, kodwa ukuthi igcwele kufanekisa eyaziwa (ikakhulukazi - izimpawu ubuCabala kanye namagugu elingu). Futhi yilokhu besuka kubo ajwayelekile kubo bonke ukudlala emphemeni. I Kungashiwo okufanayo ngokuzethemba ukuthi wazibonela imininingwane eyanele tarolog angakha isiphi isimo ihora. Inkinga iwukuthi Ochwepheshe enjalo ezweni lethu - ezimbalwa kakhulu.
Kodwa abantu abafuna ukuba asikhanyisele izenzakalo kungafiki zokuphila kwakhe, abakwazi ukhathazeke ngokuba impendulo esiqondile akudingi ulwazi ekhethekile. Kwanele ukuthenga iphakethe amakhadi nokufunda ngokucophelela ukuqondanisa imithetho. Caveat kuphela: akukho muntu okufanele akhethe emphemeni futhi emphemeni Kufanele ukhethe umuntu. Ngakho-ke, kokunquma ukuthenga, udinga ukuba sigxilise amehlo izinketho ahlinzekwa ewindini, bese ukhetha omunye okuyinto "ngadonsa umphefumulo."
Yini elindele nami eduze esizayo? Ukubhula ngezinombolo sidlala amakhadi
Ukudlala amakhadi (njengoba kuye kwashiwo eziningana ngenhla) - inzalo ngqo amakhadi enhlanhla, ngakho-ke, mahle ukubhula encane ukwazi ukucacisa isimo bese uphendula imibuzo. Vele musa overestimate ikhono lazo bacabanga ukuthi impendulo yalo uzobe efakwe, enemininingwane futhi liqondwe yibo bonke abantu futhi ngokushesha - phela zingabantu ingxenye cishe ezingaqondakali elahlekile ngokuhamba kugucuka eziningi.
Phakathi ethandwa kakhulu ukuqagela othandweni (on the amakhadi kanye Runes) nokubhula phezu ingxenye zokuphila ezingokwenyama. Isimanga siwukuthi kodwa kusukela ezihlukahlukene zale mibuzo emibili abantu abaningi banesithakazelo, uma they buza ngekusasa labo. Nokubhula ezinjalo kungenzeka ukuba babhekane: amakhadi wathenga noma iyiphi incwadi kwesibaya izakhiwo uhlelo enamathiselwe.
Of ukuyedlula yonke ukubhula ngezinombolo amakhadi ukudlala ibizwa ngokuthi ithuthukiswe esizayo uhlelo ukuqagela ngokuvumelana indlela Mma Lenormand. Kusolakala ukuthi wabikezela ummango beya esihlalweni sobukhosi Napoleon yena, futhi yasungulwa Egumbini amakhadi akhe siqu. Amenzele lokhu kunjalo asisho ukubhekana (kudingeka isipiliyoni esanele kanye nokulungiselela sasivumela eside).
Yini elindele kimi esikhathini esizayo esiseduze? Ingabe umbhuli ukuphendula lo mbuzo?
Ukukhetha umuntu kumele yente ukubhula, kuyafaneleka okuseduzane kuso. Akunakusetshenziswa akudingeki silwele ukuthandwa, futhi sibonga eziningi ukubuyekezwa. Kaningi kuyenzeka ukuthi impendulo engcono ukunikeza bezulu non-professional, ugogo wethu nawe nabantu asebebadala. Ukuze Roma kuba, ngasendleleni, asisebenzi. Akekho ethi ukuthi abakwazi ukukwenza, nenkohliso nje eziningi futhi bakhohlisi ngesisekelo imibuzo: "Yini elindele kimi esikhathini esizayo esiseduze?" kanzima ukubhodloza ukuthembeka ngisho abanekhono otolika ikhadi (nezinye) izakhiwo.
Cross-Latin: Inani izinhlobo, izithombe
Uighur Khanate: umlando, Kusukela saba khona, lo nokwahlukana